Ngeshwa, abesifazane abaningi (ama-75%) yokuzala ahlupheke Candida lezinkinobho (thrush), okuyinto kubangelwa imvubelo isikhunta bohlobo lwe-Candida. Lesi sifo lezinkinobho lingaze noma vulvovaginitis. Phawula ukuthi lolu hlobo isikhunta ngokuvamile abahlala ebusweni isikhumba, ulwelwesi lwamafinyila we temlomo na acinene ingaphakathi, sangasese, futhi esiswini. Ngakho-ke, cishe u-20% abesifazane enempilo esiqeshini zangasese ukubona isikhunta bohlobo lwe-Candida. Ukwanda okungavamile isikhunta ephelezelwa ukuvuvukala sangasese. Candida lezinkinobho ngokuvamile kutholakala amantombazane sebeke baya ocansini. Ingabe Zikhona Izimo Ezenza ayeke ukunisa ukukhula isikhunta kungenzeka ukucindezeleka, injabulo ngokomzwelo, hypothermia, imithi elwa namagciwane, kwehlisa amasosha omzimba kanye nokukhulelwa.
Ochwepheshe abaningi abalibheki Candida lezinkinobho izifo iqembu adluliswa ngokobulili. Nokho, lezinkinobho candidal ungaxoxa kusuka ozakwethu abathumela amakhowe kuthiwa isebenze ipheshana zangasese nasesikhathini ngalo ingaphakathi ngomlomo. Njengomthetho, amadoda Candida Lesifo hhayi isifo kubonakala khona.
Lokhu zokugula lihlotshaniswa engcupheni ezibanga sowesifazane sangasese amagciwane overgrowth, kuphumele i ukukhula kakhulu nembiliso. Izinto eziyingozi ezingabangela i zihlanganisa: bacterium overgrowth ka ipheshana zangasese (ukusetshenziswa kwesikhathi eside ukubulala izinzwa engxenyeni ethile, imithi elwa namagciwane, ukusetshenziswa kwamakhondomu aqukethe spermicides, khona izifo ezidluliselwa ngocansi); isizinda hormone (sokukhulelwa, ukusetshenziswa konratseptivov hormone namanye amalungiselelo); okuhlushwa kukhuphuke ushukela egazini (ukusetshenziswa ngokweqile nokudla okune imali ethe ushukela, isifo sikashukela); immunodeficiency yesibili (ukusetshenziswa nokunwetshiwe izidakamizwa immunosuppressive, ukutheleleka nge-HIV, izifo ukuvuvukala, isifo sofuba, umdlavuza, ukuchayeka emisebeni eyingozi).
Candida lezinkinobho: izimpawu
Ifomu acute lesi sifo libhekene izimpawu evelele. Clinical izimpawu isifo ngesimo esindayo osenyameni nokunjengoshizi esithweni sangasese. Uma uyikha phezulu le kwesikhumba futhi mucosa we ngemomozi futhi emomozini kwakhiwa amawala, edema kanye hyperemia. Iziguli ngokuvamile bakhononda ngokuthi endaweni we zangasese sangaphandle ikhathazeke ukulunywa futhi esivuthayo, okwandisa ngemva kokuya ocansini, ukwelashwa kwamanzi noma ngesikhathi sokulala.
Sifo kusekelwe idatha anamnestic, zocwaningo laboratory neluhlolo emtholampilo. Laboratory uphethwe kuhlanganisa microscopy (smear kumele ibe fresh, hhayi amahora angaphezu kwamabili ekuthatheni, ku ngokunemba ukukhethwa kanye nokulungisa a smear ukufunda ukunemba indlela kuncike); imitha pH (definition okuqukethwe asidi sowesifazane sangasese). Bacteriological ukuhlwanyelwa okuqukethwe lwesitho sangasese sowesifazane iyona ndlela sizwele ukuxilongwa candidiasis lwesitho sangasese sowesifazane. Ukusebenzisa polymerase chain reaction kungaba azimisele imvubelo in a smear.
Candida lezinkinobho: ukwelashwa
Gynecologists ukuncoma ukugcina sinemikhuba emihle yenhlanzeko, zangaphansi kufanele kube ukotini, kusukela umzimba ukwangana zokwenziwa izingubo kumelwe zilahlwe. Esesikhathini kungcono ukusebenzisa pads sanitary esikhundleni tampons. Ukwelashwa nokuvikelwa candidiasis kusetshenziswa antimycotic (imithi elwa namagciwane antifungal "Polygynax" "Clotrimazole" "Terzhinan" "Flukostat" "Cancidas" "Flukoral" "Clotrimazole"), kusetshenziswe ihlelwe ngokulandelana kwezihloko noma ngaphakathi. Ngaphambi enquma ngempela eyenziwa ukuzwela ukuhlolwa of nembiliso ukuze antimycotics. 7-10 izinsuku edingekayo ukuze afeze ukuqapha ukuphumelela ukwelashwa.
A ikhambi umdlavuza pancreatic. amakhambi Folk amanyikwe
Ukwelashelwa ubuthi. Usizo lokuqala.
I-ATM VTB24 nomsebenzi wokuthola imali: indlela yokusebenzisa idivayisi
Kirill Kopelyan. "Lena siphambano sami" (ukuvuma kamama)
I-Vjun - isitshalo sekhaya nensimu. Incazelo nesithombe
Ukuthuthukela Windows 8 Indlela ukufaka i-Windows 8
Indlela ubophele line ukudoba kuya spool: izindlela kanye namathiphu
Academy of Pediatrics eLithuania. Petersburg Pediatric Medical Academy
Uchungechunge oluthi "Mongrel Lala": nabalingisi izindima lwenziwa movie
"UGus ingulube akuyona umngane": ukubaluleka phraseologism